၂၀၁၅ | 2015 ၏စာမျက်နှာ4| NAB သတင်းများ | 404 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 (စာမျက်နှာ 4)
ကို Creative စက်ဝိုင်းတည်နေရာ: အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်ဟူစတန် TX အမေရိကန် + ကို Adobe Photoshop ကို, Illustrator, Flash ကို, ပရီးမီးယားလိဂ်, ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ client ကို, အ Westchase ဧရိယာထဲမှာဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ, >> နောက်ထပ် ... တစ်ဦးဒစ်ဂျစ်တယ်ဂရစ်ဖစ်ရှာသော
Huntsville, AL တည်နေရာ၏စီးတီး: Huntsville AL အမေရိကန်စီးတီးဌာနဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအယ်ဒီတာများမှဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလေ့ကျင့်ရေးပေး; သက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ, ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများနှင့်ဘလော့ဂ်များနှင့်အတူစီးတီးရဲ့လူမှုမီဒီယာအကောင့်အပ်ဒိတ်; ... နောက်ထပ် >>
အမြင့်5အားကစားပြိုင်ပွဲတည်နေရာ: Adobe Photoshop, Flash နှင့်ကို Adobe နှင့်အတူနယူးယောက်နယူးယော့အမေရိကန်အတွေ့အကြုံအကျိုးသက်ရောက်မှုလိုအပ်ပါသည်ပြီးနောက်။ နောက်ထပ် ... ကူညီပေးဖို့အနုပညာရှင်တွေ, Animation, QA သို့, software နှင့်အသံကအင်ဂျင်နီယာများနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ် >>
Interdisciplinary အထွေထွေအင်ဂျင်နီယာ / ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနတည်နေရာ၏ဦးစီးဌာန: ဝါရှင်တန်ဒီစီကအမေရိကန်အနေနဲ့ Interdisciplinary ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် / အထွေထွေအင်ဂျင်နီယာချုပ်အဖြစ်, သငျသညျ :. ပါလိမ့်မယ် GS-0801 Professional Engineering and GS-1301 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် MINIMUM အရည်အချင်းများ: ... နောက်ထပ် >>
FULL တွင် TIME PRODUCTION ASSISTANT
Cumulus မီဒီယာတည်နေရာ: Lafayette LA ကအမေရိကန် Cumulus အသံလွှင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတူညီသောအခွင့်အရေး Equal Opportunity နှင့်ကတိသစ္စာပြုလှုပ်ရှားမှုအလုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြိနျမှနျမှနျလိုအပျအဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုဒါရိုက်တာဘို့အတွက်ဖြည့်ပါ ... ။ more >>
အလုပ်သင်ဆရာဝန်: ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် | ဓာတ်ပုံဆရာ | အယ်ဒီတာ
အဆိုပါ Herbalista သတ်မှတ်မည်, Inc တည်နေရာ: Denver CO အမေရိကန်ဗွီဒီယို, ဓာတ်ပုံ, အသံကလစ်များနှင့်စတော့ရှယ်ယာပုံရိပ်အပါအဝင်သတင်းရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးသုံးပြီးဆွဲဆောင်မှုဗီဒီယိုများထုတ်လုပ် ... ။ more >>
စက်မှုသင်တန်းကျောင်းအတိုင်ပင်ခံတည်နေရာ: ဘာမင်ဂမ် AL အမေရိကန်ကို Adobe Flash ကိုဆော့ဖ်ဝဲ, Illustrator နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက် :. Illustrator နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတှေ့အကွုံပြီးနောက်တစ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ >> ပို ... အချိန်ပြည့်မာလ်တီမီဒီယာရှာဖွေနေသည်
အလွတ်တန်းဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက် Editor ကို
: D စိတ်တိုင်းကျတည်နေရာ: Dallas မြို့ကတက္ကဆပ်အမေရိကန် Edit ကိုအကြောင်းအရာတာဝန်ကျတဲ့နေရာကနေထုတ်လုပ်မှုဖို့အားလုံးကိုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးစာရေးဆရာသို့မဟုတ်အယ်ဒီတာအဖြစ်ထုတ်ဝေအတွက်အတွေ့အကြုံ 5-10 နှစ်ပေါင်းရပါလိမ့်မယ် ... ။ more >>
4 ၏စာမျက်နှာ 404«ပထမဦးစွာ...«23456 » 102030...နောက်ဆုံး»